android ဖုန်းများအတွက် Locker APK ဖိုင် | APK ကိုအန်းဒရွိုက်သည် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » အားလုံး Apps ကပ » file ကို Locker
file ကို Locker APK ကို
ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲစာဖတ်ခြင်း, ကစား, စောင့်ကြည့်, စတာတွေဆန့်ကျင်သင့်ရဲ့ content တွေကိုကာကွယ်ပါဒီ application ဖိုင်ကို encodes ကဖတ်လို့မရအောင်စေသည်။ သငျသညျဓာတျပုံ, ရုပ်ရှင်များ, စာရွက်စာတမ်းများ, xxx-content ကို, သငျသညျကိုဖတ်ရှုခြင်းမှအခြားလူများတားဆီးချင်သောလူအပေါင်းတို့နှင့်တူမဆိုမီဒီယာရှိပါသလား? FileLocker သင်တို့အဘို့အညာဘက်ဖြစ်ပါတယ်။
- မယ့်နှစ်ဦးစလုံးအစအဦးများနှင့်ဖိုင်ဇာတ်သိမ်း (optional) တားဆီးခြင်းအားဖြင့် (ရုပ်ရှင်လိုမျိုး) ကြီးမားသောဖိုင်တွေသော့ခတ်ဖို့မြန်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
- သင်အကာအကွယ်မဲ့စာရွက်စာတမ်းများ left စိတျထဲမှာထားရန်, အကြောင်းကြားစာအားဖြင့်ယာယီ unlocked ဖိုင်တွေသီချင်းများ။
- အဖြစ်ကောင်းစွာအကြောင်းအရာနှင့်ဖိုင်အမည်များ Encodes ။
- တခြား applications များအားဖြင့် file ကိုမြင်နိုင်စေရန်ပြောင်းလဲမှုပြီးနောက်အလိုအလျောက်အန်းဒရွိုက်မီဒီယာ Scanner ပါဝင်။
- စမတ်စာရွက်စာတမ်းများ, သော့ခတ်ခြင်းနှင့် unlocked ဖိုင်များကို directory များမှတဆင့်ရှာဖွေနေ။
- app ကိုမှတိုက်ရိုက်စာရွက်စာတမ်းများဖွင့်မည်။
- အသုံးပြုသူကျန်ရစ်ခဲ့ကြရာမေ့လျော့ unlocked ဖိုင်များ, အကြောင်းကိုအကြောင်းကြားပါ။
အသိပေးစာ: စကားဝှက်ကိုဘယ်နေရာမှာမဆိုသိမ်းဆည်းထားမပေးသည်ကို ထောက်. အဘယ်သူမျှမ password recovery procedure ကို, ရှိပါသည်။ စကားဝှက်ကိုပေါင်းလဒ်ထိန်းချုပ်မှု (တလမ်းတည်းဖြင့်စာဝှက်စနစ်) ၏ဖွင့်ကြင်နာ Program ကိုစစ်ဆေးမှုများ။
ဖိုင် Locker မူရင်းအမည်နှင့်ဖိုင်ပျက်စီးဖြစ်နေဆဲ restore နိုင်မဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိုင် name ကို encrypted ကိုသတိပြုပါ, အခြားအစီအစဉ်များအားဖြင့်ပြောင်းလဲသွားရနိုင်မှာမဟုတ်ဘူး။
သငျသညျ, ပြဿနာအစီရင်ခံရန်လိုခငျြတဲ့ feature အသစ်အဆိုပြုသလား? အကြှနျုပျကိုအီးမေးလ်ကကျေးဇူးပြုပြီးပို့ပါ။ ကျေးဇူး
- အန်းဒရွိုက် KitKat ကို 4.4 ထောက်ခံမှုကဆက်ပြောသည်
- အကျင့်ပျက်ဖိုင်တွေပြဿနာဖြေရှင်းကြောင်းနယူး hash algorithm ကို
- အခြားသူများအသေးစား bug တွေပြေလည်
ဒီဇင်ဘာလတွင် 24, 2018 မှာ 10: 09 နံနက်
ကိုယ့်ဖိုင်ယိုယွင်းသို့မဟုတ်မမှန်ကန် version.i ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်မှဖိုင်ကိုပြောင်းရွေ့သော့ခတ် open.it ရှိုး donot ပေမယ့်ပြန် that.please အကူအညီနဲ့ပြသထားတယ်ငါ့အ file.the ဖိုင်ကိုသော့ခတ်ပါပြီ
Delesa Geleta says:
ဒီဇင်ဘာလတွင် 6, 2018 မှာ 7: 30 ညနေ
အစဉ်အမြဲငါ, ငါ့ဟာအကောင်းဆုံး memory သော့ခတ်သော်လည်းငါ့စကားဝှကျကို forgote, solve😂ဖို့ကျွန်မကိုတစ်ခုခုပြောပြကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီးကျေးဇူးပြုပြီး
အောက်တိုဘာလ 19, 2018 မှာ 7: 08 ညနေ
ငါ၏အ phone.it ခုနှစ်တွင်ဈ pasaword ပြင်ပေးကပြောပါတယ်။ ဒါပေမယ့်မှန်ကန် password.and အချို့ဖိုင်တွေဒီစကားဝှက်ကိုအခြား pics မဟုတ် opened.plz အကူအညီဖြင့်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်
အောက်တိုဘာလ 16, 2018 မှာ 9: 31 ညနေ
ကိုယ်ဖိုင်ကိုသော့ဖွင့်ဖို့ယခုကြောင့်လုပျနိုငျ ... ငါ့အ password ကိုမေ့လျော့ကြပြီ ??
အောက်တိုဘာလ 16, 2018 မှာ 9: 21 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 8, 2018 မှာ 1: 42 ညနေ
အဆိုပါ ORIO update ကိုကတည်းကရိုက်ကူးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေကတည်းကပထမဦးဆုံးဖိုင် Locker ကျွန်ုပ်၏ဖုန်းဖွင့်လှစ်ခဲ့သည်
Senthil Murugan ကို C says:
သြဂုတ်လ 20, 2018 မှာ 9: 15 နံနက်
ငါတချို့ကဖိုင်များသော့ခတ်ခဲ့။ ယခုငါနယူးမိုဘိုင်း၌ငါဖိုင်မှတ်တမ်း Locker သို့သော်တဖန်ဖိုင်မှတ်တမ်းကိုဖွင့်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး Installed ဖူး, ငါ၏မိုဘိုင်းပြောင်းလဲပြီ။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်တော့်ကိုကူညီပါ..
အောက်တိုဘာလ 16, 2018 မှာ 8: 32 နံနက်
ကြိုးစားကြည့်ပြီးတော့ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက် data တွေကိုရွှေ့
ဇန်နဝါရီလ 4, 2019 မှာ 8: 01 နံနက်
ကိုယ့်ဖိုင်ကိုပြောင်းရွေ့ပါပြီ။ ဒါပေမယ့်နောက်တဖန်ပုပ်သို့မဟုတ်မမှန်ကန် version.plz အကူအညီနဲ့ပြသ
သြဂုတ်လ 15, 2017 မှာ 2: 01 ညနေ
အောက်တိုဘာလ 16, 2018 မှာ 8: 33 နံနက်
ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးထို့နောက်ဖုန်းကိုမှတ်ဉာဏ်အတွက် data တွေကိုရွှေ့
ဒီဇင်ဘာလတွင် 20, 2018 မှာ 11: 52 နံနက်
ကိုယ့်ကြိုးစားခဲ့ကြပေမယ့် open.it မကြာမီဖိုင်ယိုယွင်းသို့မဟုတ်မမှန်ကန် version.please အကူအညီနဲ့ပြသထားတယ် doesnot
သြဂုတ်လ 8, 2017 မှာ 11: 05 ညနေ
ငါ၏အဖျက်မှုကိုဓာတ်ပုံတစ်ပုံ & ဗီဒီယိုကိုဘယ်လိုရှာတွေ့?
သဲ Miller က says:
ဧပြီလ 11, 2017 မှာ 3: 04 နံနက်
ဒီ app ကိုသူတို့ကယ်တင်ခြင်းသို့ရောက်ရက်စွဲအဖြစ် (ထို app ထဲမှာပြသကဲ့သို့) ငါ၏အ files တွေကိုအမည်ပြောင်းစတင်ခဲ့သည်။ ငါသည်ဤအပြုအမူကိုဘယ်လိုရပ်တန့်သလဲ?
မတ်လ 19, 2017 မှာ 12: 11 ညနေ
ငါသည်ငါ့လူအုပ်စုပြောင်းလဲသွားတယ် hav som files.now သော့ခတ်ခဲ့သည်။ အသစ်သောလူအုပ်စုထဲမှာကိုယ့်ကို install ဖိုင် Locker hav ပေမယ့်အကူအညီနဲ့ again.plz ဃဖိုင်တွေဖွင့်ဖို့ im နိုင်ခြင်း
စက်တင်ဘာလ 16, 2016 မှာ 10: 30 နံနက်
ဖိုင် locker.very များအတွက်စူပါ .best app ကိုအသုံးဝင်သော simple.most ။
ဖေဖေါ်ဝါရီလ 1, 2016 မှာ 12: 35 ညနေ